WIC एक आमाको सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। यो एक विशेष पूरक पोषण कार्यक्रम हो जुन महिला, शिशुहरू, र बच्चाहरू, र अधिकको लागि डिजाइन गरिएको हो! WIC लाभहरू पाउन सजिलो भयो: नयाँ लुइसियाना eWIC कार्ड र WICShopper अनुप्रयोगले किनमेल सजिलो र अधिक सुविधाजनक बनाउँदछ। सजिलो यो र मजा आफ्नो परिवार खुवाउन बनाउन किनमेल सुझाव, व्यञ्जनहरु र अधिक प्राप्त गर्नुहोस्।
२०१ In मा, लुइसियाना WIC ले कागज भाउचरबाट नयाँ इलेक्ट्रोनिक WIC कार्डमा बदल्नुभयो! यसले भुक्तान प्रक्रियालाई अन्य प्रकारका कार्ड-आधारित भुक्तानीहरूसँग समान बनाउँदछ।
कृपया तलको भिडियो हेर्न र आफ्नो WIC कर्मचारी सोध्न eWIC कार्ड तपाईँको स्थानीय WIC कार्यालय आउने हुँदा!
प्रयोग गर्नुहोस् "WIC कार्यालय खोज्नुहोस्निकटतम क्लिनिक फेला पार्न WICShopper अनुप्रयोगमा "बटन
मेरो कार्ड ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्
दुर्भाग्यवश, लुइसियाना WIC अझै WICShopper मा ब्यालेन्स जाँच गर्न सेट अप गरिएको छैन। यो भविष्यमा उपलब्ध हुनेछ। तपाईंको अन्तिम किनमेल यात्राबाट तपाईंको लाभ ब्यालेन्स प्रिन्टआउटको छवि भण्डारण गर्नको लागि कृपया एपमा "क्याप्चर बेनिफिट्स" सुविधा प्रयोग गर्नुहोस्।
अनुमति - यो आईटमहरु WIC को लागी अनुमति छ। यो जान्न एक खाना WIC अनुमति दिएको छ भने एक महान तरिका हो। थाहा एउटा कुरा तपाईं एउटा वस्तु अनुमति छ हेर्न सक्छ, तर यो त तपाईं WIC यसलाई किन्न सक्दैन, आफ्नो WIC खाद्य लाभ मा छैन। WIC लाभहरू WICShopper अनुप्रयोगमा लिंक नभएसम्म, यो "अनुमति दिईएको" सन्देश तपाइँको परिवारका लाभहरूमा लागू हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि, एक वर्ष पुरानो बच्चा पुरा दूध हुन्छ। यदि तपाईंसँग तपाईंको परिवारमा एक बर्षको बच्चा छैन भने, सम्पूर्ण दूध तपाईंको WIC खाना बेनिफिटहरूको अंश हुनेछैन, र तपाईं चेक स्ट्यान्डमा पूरा दूध किन्न सक्षम हुनुहुने छैन।
WIC वस्तु होइन - यसको मतलब WIC ले यस वस्तुलाई अनुमोदन गरेको छैन। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ WIC खाना बेनिफिटको साथ यो खाना किन्न सक्षम हुनुपर्दछ भनेर हामीलाई थाहा दिनुहोस् "म यो किन्न सक्दिन!" [HC (]] यस अनुप्रयोगमा अवस्थित छ।
पहिचान गर्न असमर्थ - यो अनुप्रयोगलाई बारकोड पढ्न सक्दैन हो। अनुप्रयोगलाई बारकोड पढ्नका लागि कुनै पनि कारण को लागि, यो कठिन छ भने तपाईँ यो सन्देश पाउनुहुन्छ। तपाईं पनि बटन प्रमुख UPC प्रविष्ट गर्नुहोस्, अनुप्रयोग मा बारकोड अन्तर्गत स्थित 12 अंकको UPC नम्बर प्रविष्ट गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।